ဘာရှန်ချာကျွန်းပေါ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်း။
ပင်လယ်ထဲမှာ သီတင်းပတ်များစွာ လှေနဲ့မျောနေပြီးနောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ကယ်တင်ပြီး ဘာရှန်ချာကျွန်းကို ပို့ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို ကော့ဇ်ဘဇားခရိုင်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆီ ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ COVID-19 ကူးစက်မှု အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက် စိုးရိမ်နေချိန်မှာပဲ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres ရဲ့ ပန်ကြားချက် ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး A.K. Abdul Momen ဆီကို မေလ ၁၄ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ပေးပို့တဲ့စာမှာ ပင်လယ်ထဲက ကယ်တင်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၃၀၈ ယောက်ကို COVID-19 ရောဂါ ကင်းရှင်းအောင် သီးခြားခွဲခံထားရတဲ့ကာလ အပြီးမှာ ဒုက္ခသည်တွေအဖြစ် အကာအကွယ် ပေးသင့်တယ်လို့ ရေးသားထားကြောင်းလည်း AFP သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့စာကို လက်ခံရရှိမထားသေးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သလို စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ခေါ်ထားကြဖို့၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖိအားပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ မေလအစောပိုင်းမှာ ပင်လယ်ထဲက ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုအန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို မပို့ဘဲ ဘာရှန်ချာကျွန်းကို ပို့ခဲ့တာပါ။
ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး အစီအစဉ်တွေ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးခင်မှာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၁ သိန်းလောက်ကို ဘာရှန်ချာကျွန်းမှာ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ရေကြီးရေလျှံမှုတွေ အပါအ၀င် မုတ်သုံရာသီမှာ ရာသီဥတု ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒဏ် ခံရနိုင်တဲ့အတွက် စိုးရိမ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ARSA ရိုဟင်ဂျာ အစွန်းရောက်အုပ်စုကို မြန်မာစစ်တပ်က လိုက်လံရှင်းလင်းရာက သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတာပါ။ မြန်မာအစိုးရကတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို လက်မခံပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လည်စိစစ် လက်ခံမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဘာရှနျခြာကြှနျးရောကျ ရိုဟငျဂြာတှေ ဒုက်ခသညျစခနျးပွနျပို့ဖို့ ကုလတိုကျတှနျး
ပငျလယျထဲမှာ သီတငျးပတျမြားစှာ လှနေဲ့မြောနပွေီးနောကျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံက ကယျတငျပွီး ဘာရှနျခြာကြှနျးကို ပို့ထားတဲ့ ရိုဟငျဂြာ ဒုက်ခသညျတှကေို ကော့ဇျဘဇားခရိုငျမှာရှိတဲ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတှဆေီ ရှပွေ့ောငျးပေးဖို့ ကုလသမဂ်ဂ အတှငျးရေးမှူးခြုပျက တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
ဒုက်ခသညျစခနျးတှမှော COVID-19 ကူးစကျမှု အတညျပွုခဲ့ပွီးနောကျ စိုးရိမျနခြေိနျမှာပဲ ကုလသမဂ်ဂ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ Antonio Guterres ရဲ့ ပနျကွားခကျြ ထှကျပျေါလာတာပါ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး A.K. Abdul Momen ဆီကို မလေ ၁၄ ရကျ ရကျစှဲနဲ့ ပေးပို့တဲ့စာမှာ ပငျလယျထဲက ကယျတငျထားတဲ့ ရိုဟငျဂြာ ၃၀၈ ယောကျကို COVID-19 ရောဂါ ကငျးရှငျးအောငျ သီးခွားခှဲခံထားရတဲ့ကာလ အပွီးမှာ ဒုက်ခသညျတှအေဖွဈ အကာအကှယျ ပေးသငျ့တယျလို့ ရေးသားထားကွောငျးလညျး AFP သတငျးက ဖျောပွပါတယျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးကတော့ ကုလသမဂ်ဂ အတှငျးရေးမှူးခြုပျရဲ့စာကို လကျခံရရှိမထားသေးကွောငျး ပွောဆိုခဲ့သလို စိုးရိမျပူပနျတဲ့ နိုငျငံတှအေနနေဲ့ ဒုက်ခသညျတှကေို ချေါထားကွဖို့၊ ဒါမှမဟုတျရငျလညျး ဒုက်ခသညျတှေ နရေပျပွနျရေး မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ဖိအားပေးဖို့ ပွောဆိုခဲ့တာပါ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ တာဝနျရှိသူတှကေတော့ မလေအစောပိုငျးမှာ ပငျလယျထဲက ကယျဆယျခဲ့တဲ့ ရိုဟငျဂြာတှမှော COVID-19 ကူးစကျမှုအန်တရာယျ ရှိနိုငျတယျဆိုပွီး ဒုက်ခသညျစခနျးတှကေို မပို့ဘဲ ဘာရှနျခြာကြှနျးကို ပို့ခဲ့တာပါ။
ဒုက်ခသညျတှေ နရေပျပွနျရေး အစီအစဉျတှေ အကောငျအထညျ မဖျောနိုငျသေးခငျမှာ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျ ၁ သိနျးလောကျကို ဘာရှနျခြာကြှနျးမှာ ပွောငျးရှနေ့ရောခထြားဖို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အစိုးရက ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကစလို့ စီစဉျခဲ့ပမေယျ့လညျး ရကွေီးရလြှေံမှုတှေ အပါအဝငျ မုတျသုံရာသီမှာ ရာသီဥတု ကွမျးတမျးတဲ့ဒဏျ ခံရနိုငျတဲ့အတှကျ စိုးရိမျမှုတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။
၂၀၁၇ ခုနှဈတုနျးက ရခိုငျပွညျနယျမှာ ARSA ရိုဟငျဂြာ အစှနျးရောကျအုပျစုကို မွနျမာစဈတပျက လိုကျလံရှငျးလငျးရာက သိနျးနဲ့ခြီတဲ့ ရိုဟငျဂြာတှေ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံကို ထှကျပွေးတိမျးရှောငျခဲ့ကွတာပါ။ မွနျမာအစိုးရကတော့ ရိုဟငျဂြာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို လကျမခံပမေယျ့ ဒုက်ခသညျတှကေို ပွနျလညျစိစဈ လကျခံမယျလို့ ပွောထားပါတယျ။